20 kaa bilood Dick Cheney wuuxuu ka cabsanayey iney argagixisadu qarxiyaan qalabka elegtarooniga ah ee wadnihiisu ku shaqaynayey. Cheney ayaa sheegey in dhakhaatiirtu ku xireen qalabkaas oo ka caawinayey garaacista wadnihiisa, isla markaana ay suura gal ahayd in la qarxiyo ama khalkhal geliyo qalabkaas wadnaha u ahaa.
"Waxaan dhowr jeer isku deyey inaan damiyo, anigoo danaynayey ammaankayga, laakiin dhakhaatiirta ayaa iiga digtay inaanan samayn oo noloshayda khatar gelin" ayuu yiri. Dick Cheney oo qaba wadna xanuun ayaa laga bedeley wadnihii ka dib markii ay soo korodhay cabsida ah in la khalkhalin karo qalabka wadnihiisu ku shaqaynayey.
"Mudadii labaatanka bilood ahayd een xidhnaa qalabkaa, oo ahayd xilli dalka Maraykanku kula jirey dagaal argagixisada, waxaan inta badan ka soo boodi jirey hurdada, anigoo markasta oo wadnahaygu garaacda yareeyo is oran jirey argagixisadii ayaa heshay wadnahaaga" ayuu ku kaftamay Cheney.
Inkastoo qalabkan lagu xidhay Dick Cheney oo ahaa wirreless laga tirtiray dhamaan waxyaabihii lagu soo bartilmaameedsan lahaa, haddana waxaa jirtey fursado badan oo dadka xarfaanta ku ahi ay ku kharibi karayeen, taas ayaana u sabab ahayd in aanu tegi jirin isla markaana ka khudbadayn jirin meelaha laysugu yimaado sida hoteeladaoo kale.
Madaxweyne ku xigeenkii hore Maraykanka Dick Cheney inkastoo laga bedeley wadnihii hadana weli xaalkiisa caafimaad ma wanaagsana, waxaana intaa u dheer cabsi uu ka qabo dad uu ku tilmaamo argagixiso, iyo isagoo mamnuuc ka ah gobolo iyo magaalooyin Maraykanka ah, dagaaladii uu dalka geliyey dartood. Dhinaca kalena Kanada ayaa bishii hore ku biirtay Yurub oo u sheegtay Cheney inaan dad badani jeclaysan doonin imaanshihiisa, sidaa darteedna wuxuu joojiyey safar uu Kanada ku tegi lahaa.